Version 0.5.1 – Database fanatsarana
Aprily 11, 2010 amin'ny tolotra 2 Comments
Vaovao io dikan-mamaha olana efa tena antitra amin'ny andian-teny nandika ela kokoa noho ny 255 anjara. Izany fiovana izany fa tsy fanatitra alatsa-drà no hafainganam-pandeha, fa raha ny marina kokoa izany dia manaraha ny vaovao tsara amin'ny fanondroana mba hitovy. Ny miasa amin'ny fehezan-dalàna ny banky angona dia nahita ihany koa ny fomba hanaovana ny plugin manatanteraka haingana be (indrindra rehefa caching APC tsy nampiasaina) izay fandikan-teny maro izao fanontaniana vondrona ho amin'ny banky angona ho fangataham-panazavana iray.
Ny fandikan-teny kely bibikely amin'ny textarea Tags voavaha ihany koa noho ny Timo.
Toy ny foana – manantena fa ny feedbacks.